Mumazuva ano edu zvirinyore kungonyepedzera kupedza nguva nevamwe. Nekudzvanya mausi yekombiyuta, tinokwanisa “kubatana” nezviuru zve“shamwari” tisingambofa takava tinotarisana kana nemumwechete wavo. Tekinoroji inokwanisa kuva chinhu chakanakisisa chaizvo, uye inobatsira zvikuru apo patisingakwanise kuva padyo nevadikanwi vedu. Mudzimai wangu neni tinogara kure nenhengo dzemhuri dzinokosha; tinoziva kuti izvozvo zvakaita sei. Zvisinei, ndinotenda kuti h